Turkiya: Urur Samafal oo 27 dal oo muslim ah xoolo ku gawracaya - Tilmaan Media
Turkiya: Urur Samafal oo 27 dal oo muslim ah xoolo ku gawracaya
Ururka samafahalka ah ee Cansuyu ayaa inta lagu guda jiro maalmaha ciidda wuxuu 30,000 oo neef ku gawrici doonaa ilaa 27 dal oo badankood katirsan dalalka Islaamka.
“Inkastoo ay jiraan caqabadaha safarka la xiriira haddana ururka Canusyu oo xaruntiisu kutaal Istanbuul waxay doonayaan inay 1.5 malyan oo qof ay deeq gaarsiiyaan maalahan ciida” ayuu yiri Mustafa Koylu oo ah madax ururkan.
Ololaha deeq gaarsiinta ee sanadkaan Cansuyu waxay hortabinta siinaysaa dalalka ay dhibaatada iyo baahida badani kajirto sida Yemen, Rakhine oo katirsan Myanmar, Ismaamul goboleedka Bangsamoro ee muslimiinta Mindano, Filibiin, iyo Falastiin ayuu yiri Koyu.
Marka la,eego dhanka Afrika Koyu wuxuu sheegay in sanadkaan ay gaari doonaan dalalka ay kamid yihiin Mauritania, Chad, Cameroon, Niger, Benin, Mali, Tanzania, Guinea, Senegal, Zimbabwe, iyo Zambia.
Dalalka ay kamid yihiin Burundi, Somalia, Kenya, South Sudan, Burkina Faso, Togo, Ivory Coast, and Yemen, iyo marinka Qaza, waxaa laga samayn gawrac xoolo oo aad u ballaaran iyadoo lala kaashanayo ururo samafal oo maxalli ah.
Inkasta oo Koronfayras saamayn ku yeeshay isu socodka caalamiga ah, iyo dakhkliga dadka, Koyu wuxuu sheegay in ay rajjo ka qabaan in dad badan ugu deeqi doonaan walaalahooda baahan tabarrucaad wixii ay karaan.
Madixii Warfaafinta iyo Xiriirka dadwaynaha ee Xafiiska Raysalwasaaraha oo shaqada katagay
Laftagareen oo kubaaqay in lataakuleeyo dadka wax kunoqday fatahaada wabiga Shabeelle